दक्षिण अफ्रिकाकी एक महिलाले ७ महिनामै एकैपटकमा जन्माइन् १० सन्तान, राखिन बिश्व रेकर्ड - Mitho Khabar
June 23, 2022 mithokhabarLeaveaComment on दक्षिण अफ्रिकाकी एक महिलाले ७ महिनामै एकैपटकमा जन्माइन् १० सन्तान, राखिन बिश्व रेकर्ड
दक्षिण अफ्रिकाका ३७ वर्षीया महिलाले एकैपटकमा १० जना बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । एकैपटकमा एक महिलाले १० शिशु जन्माएर विश्व रेकर्ड राखेकी छन्। यद्यपि दक्षिण अफ्रिकी सरकारले भने यस विषयमा अझै तथ्य रेकर्ड भेटिन बाकिँ रहेको जनाएको छ ।
राजधानी प्रेटोरियाको एक अस्पतालमा गोसिएम थमारा सिथोल नामकी महिलाले तीन छोरी र सात छोरालाई एकैसाथ जन्म दिएको बताइएको छ । ती महिला पहिले पनि जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा थिइन् ।
सितहोलले डाक्टरले ६ देखि ८ सन्तान जन्मिने बताएपनि आफूले १० सन्तान जन्माएपछि परिवार अचम्मित भएको बताइन्। प्रेटोरिया न्युजसँग उनका श्रीमान तेबोहो सोतेसीले भनेका छन्,‘७ छोरा र ३ छोरीको जन्म भएको छ। मेरी श्रीमती ७ महिना ७ दिनको गर्भवती थिइन्। म खुशीसँगै भावुक भएको छु।’
यसैबीच यतिबेला सितहोलले गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड राखेको भनेर चर्चा चलेको छ। हालसम्म विश्वमा ९ सन्तानको मात्र एकैपटक जन्म भएको रेकर्ड थियो। सो रेकर्ड मालीयन हालिमा सिसेको नाममा छ। मोरोक्कोकी उनले गत महिना मात्र ९ सन्तानको जन्म दिएकी थिइन्।
आज माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्ने विशेष दिन ! कारण र विधि जान्नुहोस् !
सरकारले भन्यो – ग्यासकाे अभाव छैन्, नपाए ११३७ वा ९८५११४४१८९ मा फोन गर्नू !
एमसीसीका विषयमा बाेल्न खाेजेपछि भुसाललाई मन्त्री छाेड्न प्रधानमन्त्रीकाे चे’तावनी
January 25, 2020 mithokhabar
नागिनको सुटिङ भइरहँदा साँच्चैको नाग आएपछि…..हेर्नुहाेस्(भिडियाे सहित)
म २३ बर्षकी सिगंल हुँ, म एक्लै छु मलाई फोनमा बोल्ने रमाइलो गर्ने केटा साथी चाहीयो
साउदी अरेबियमा कारको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका खोटाङका ३१ वर्षीय सोनिलको शव साउदी नै अड्कियो
विवाहको ८ वर्षसम्म भएन शा’रीरिक स’म्बन्ध, पत्नीले मागिन क्षतिपूर्ति
ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ चढेको गाडी
तान्त्रिकको मद्दतबाट आफ्नो पतिलाई वशमा गर्न पत्नीले २ सालसम्म यस्तो काण्ड गरेपछि…
दुई बालकलाई बाढीबाट जोगाउने यी बाबुछोराको सर्वत्र चर्चा, जसले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर कमालको शैलीमा यसरी गरे उद्धार, तस्विर भाइरल
आफ्नै श्रीमानलाई पनि थाहा हुँदैन म’हिलाले यी गो’प्य कुराहरु (जानी राखौं)
रोपाइँ उत्सव मनाउने क्रममा अपरिचित व्यक्तिले आफूमाथि हातपात गरेको रेस्लर जुरेलीको आरोप
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला , ॐ लेखि सेयर गरौं !!!
आठ वर्षपछि नेपाल फर्किएकी अरुणिमाको सुन्दरता उस्तै, प्रियंका समेत लोभिइन् (तस्वीरसहित
राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि विमलाले भनिन् – ‘मैले राजीनामा दिएकै छैन’
यसपालिको रोपाइँमा पनि अस्मिता जुरेलीमाथि दुर्व्यवहार, अपरिचित पुरुषले हिलोमा पछारेपछि विवाद
गायिका दिल मायाको शब छोराले हिजो साँझ पख दागबत्ति दिएर दाहसस्कार गरेका छन, छोरा आफै कृया बस्ने भएका छन!